Mitovy finoana ve ny silamo rehetra? Horonantsary Jobily | Safidy Alemana
ny Nina von Kalckreuth 27. Septambra 2019, 14: 36 6 Votes
"Mitovy ny an'ny Silamo rehetra?" Ity no fantsona Youtube ny Jobily. Ny manelingelina, ny fomba fijery samihafa ny silamo enina dia resahina ao. Ao anatin'ity lahatsary ity dia anontaniana ireo mpandray anjara momba ny fanambarana samihafa izay resahana be dia be androany. Raha amin'ny endrika marika fantatra amin'ny dinidinika dia tokony haneho ny heviny momba ireo fanambarana ny olona amin'ny fametrahana ny tenany eo anelanelan'ny "tsy mitovy hevitra amiko" ary "manaiky tanteraka aho". Ireo hevitra sy fomba fijery samy hafa dia avy eo no resahina, toy ny:
"Ny fitafy hijab dia tsy maintsy takiana"
"Mivoatra ny herisetra ny finoana silamo"
"Ny lahy sy ny vavy dia mitovy"
Any aoriana ao amin'ilay horonan-tsary dia hisy fanambaràna bebe kokoa momba izany. Io dia mamela ny mpijery hanana fahatakarana ny toe-tsaina sy ny hasarobidin'ny mpihaino:
"Mivavaka dimy isan'andro aho"
"Fanavakavahana noho ny fivavahako"
"Afaka Miozolomana ianao ary mbola tafiditra ao amin'ny vondron'olona LGBTQ"
Amin'ny lafiny iray, ity horonantsary ity dia tena mahaliana jerena, satria ahitanao ny fijery sy ny fomba fijerinao manokana ny Silamo izay nadinadinina. Mahatakatra sy mazava ny hevitrao. Amin'ny lafiny iray, tena mahaliana ihany koa ny mahita fa misondrotra ihany koa ny fifanakalozan-dresaka ary mety miovaova ny fomba fijery. Ohatra, misy ny manontany ny CORAN ary ny hafa kosa milaza ny fiovan'ny fitondran-tenany satria mitafy hijab. Na izany aza, ny fehiny dia na eo aza ny lohateny fihantsiana: tsy ny silamo rehetra no mieritreritra.
Raha efa nanontany ny tenanao manokana momba ny lohahevitra ianao, na te handre hevitra sasany, dia tokony hijery ilay horonantsary ianao. Raha izaho manokana aloha, dia heveriko fa ilaina tokoa ny mizara an'ity horonantsary ity satria ny fantsona dia manambara ny stigmata izay mbola hita eto amin'ity sujet ity.
* Hijab (ḥiǧāb) = saron-doha Islamika, izay miasa amin'ny tranga maro mba hanatanterahana ny didin'ny ampinga.
* LGBTQ = fiombonan-dehilahy amin'ny lehilahy pelaka, pelaka, bisexual, transgender ary somer / questioning. Io fanafohezana io dia ampiasaina hamaritana ny fomba fiaina ara-pananahana na ny maha-izy azy ara-pananahana.
Previous article Legioma, mora vidy, feno
Lahatsoratra manaraka Fiarovana tontolo iainana ho an'ny # 1 efa mandroso
Legioma, mora vidy, feno